ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ပုံကြီးချဲ့ထားသော အီးကိုလိုင် ဘက်တီးရီးယား
ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး သည် ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးရန် လူများထိတွေ့နေသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များ၏ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ခြင်းမှတဆင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍ ရောဂါမဖြစ်စေနိုင်သော နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်များသည် ရောဂါများ၏ ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ ၊ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်) ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအရာ များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏ အခြေခံအကြောင်းဖြစ်နိုင်သော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ မစင်များ၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲ များ၊ အိမ်သုံးအညစ်အကြေးရေများ (မိလ္လာအညစ်အကြေး၊ ညစ်ပတ်ပေရေများ၊ မီးဖိုချောင်ရေများ)၊ စက်မှု ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတို့ ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍ ရောဂါ မဖြစ်စေချင်သော အကာအကွယ်ပြုခြင်းနည်းလမ်းများကို အင်ဂျင်နီယာစွမ်းအင်ဖြေရှင်းနည်းများ အသုံးပြု ခြင်း (ဥပမာ- မိလ္လာသိမ်းစနစ်၊ စွန့်ပစ်ရေများ ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ဆောင်ရွက်မှု)၊ ရိုးစင်းသည့်နည်းပညာများမှာ (ဥပမာ- တွင်းအိမ်သာများ၊ မိလ္လာကန်များ) သို့မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အလေ့အကျင့်များ၊ (ဥပမာ- ရိုးရှင်း သည့်ဆပ်ပြာဖြင့် လက်ဆေးခြင်းများ) တို့ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဟူသော စကားရပ်ကို တိကျသည့်ရှုဒေါင့်များ၊ အမြင်အယူအဆများ၊ နေရာဌာနများ သို့မဟုတ် နည်းဗျူဟာများ တို့သို့ အသုံးချနိုင်သည်မှာ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်သည် -
အခြေခံကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး - အိမ်ထောင်မှုအဆင့်တွင် လူတို့၏ မစင်များအား စီမံခြင်းကို ညွှန်းဆိုသည်။ ယင်းအခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းသည် ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင်၏ ပစ်မှတ်တို့ ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ညွှန်ပြချက်များ ဖြစ်သည်။
တည်နေရာရှိ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး- စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ဆောင်ရွက်မှု ကို ယင်းပစ္စည်းမြှုပ်နှံသည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်ပြီးစီးခြင်း၊ ဥပမာများမှာ - တွင်းတူးအိမ်သာများ၊ မိလ္လာ ကန်များနှင့် အင်ဟော့(ဖ်)ကန်များ
အစားအသောက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း - အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို သေချာစေသည့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍ ရောဂါမဖြစ်စေနိုင်သော စီမံဆောင်ရွက်ချက်များကို ညွှန်းဆိုသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း - ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများနှင့် ဆက်စက်၍ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေခံအကြောင်းအချက်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ယင်းအမျိုးအစားတို့၏ ထပ်ဆင့်စီစဉ်မှု များမှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲများ စီမံဆောင်ရွက်မှု၊ ရေနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များ ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ဆောင်ရွက်မှု၊ စက်မှုဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ဆောင်ရွက်မှု၊ အသံနှင့် ညစ်ညမ်းစေမှုများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဂေဟဗေဒဆက်နွယ်မှုနှင့် ဆိုင်သော မိလ္လာရေဆိုးနုတ်စနစ် - လူနှင့် တိရစ္ဆာန်တို့၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း များကသဘာဝနှင့် အာဟာရဖြစ်စေသော တကြော့ပြန်လည်စေခြင်း အယူအဆနှင့် ချဉ်းကပ်မှု။
၃ ရေဆိုးရေညစ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ဆောင်ရွက်မှု
၄ ရေဆိုးရေညစ်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုမှု
၅ ဂေဟဗေဒဆက်နွယ်မှုနှင့်ဆိုင်သော မိလ္လာရေဆိုးနှုတ်စနစ်
၆ ကျန်းမာခြင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
၇ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်လာသည့် မိလ္လာစနစ်
၈ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲများ စီမံခန့်ခွဲမှု
၉ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး
၁၀ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကမ္ဘာတွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး
၁၁ အစားအသောက်လုပ်ငန်းများတွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး
ရှေးဦးအစောဆုံး သက်သေပြချက်ဖြစ်စေသော မြို့တော်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကို ဟာရက်ပါ၊ မိုဟင်ဂျိုဒါရို တို့တွင် တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မကြာမတင်ကာလက အင်ဒုမြစ်ဝှမ်း ယဉ်ကျေးမှု၏ ရက်ဟီဂါဟီတွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းမြို့တော်စီမံချက်တွင် ကမ္ဘာ၏ ပထမဦးဆုံး မြို့တော်၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း စီမံ ချက်များ ပါဝင်ခဲ့သည်။ မြို့တော်အတွင်း တစ်ဦးချင်းအိမ်များအတွင်း သို့မဟုတ် စုဝေးထားသည့် အိမ် အုပ်စုများအတွင်း၊ ရေတွင်းများမှ ရေများကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ အခန်းတစ်ခန်းကို ရေချိုးခန်းအဖြစ် သတ်မှတ် ဖယ်ထားပြီး၊ စွန့်ပစ်ရေများကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် ရေမြောင်းများအတွင်းသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိစေပြီး ယင်းရေမြောင်းများသည် အဓိကလမ်းများကို ဦးတည်ပါသည်။ အိမ်များကို အတွင်းပိုင်းကျယ်ပြန့်သည့် နေရာများနှင့် သေးငယ်သော လမ်းများကို ဖွင့်လှစ်စေခဲ့သည်။
ရောမမြို့တော်များနှင့် ရောမရှိအပန်းဖြေအိမ်များ၌ ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေဆိုးနုတ်သည့်းစနစ်များအတွက် အခြေခံ အချက်များရှိသည်။ ပွန်ပီကဲ့သို့သော မြို့တွင် ရေများကို လမ်းများပေါ်တွင် ဝေငှပေးနေပြီး၊ ကျောက်တုံး များ၊ သစ်သားများတို့ဖြင့် ရေမြောင်းများဆောက်လုပ်ထားခြင်းများသည် လူနေထူထပ်သည့် နေရာများမှ ရေဆိုးရေညစ်များကို စုဆောင်းရန်နှင့် ဖယ်ရှားပစ်ရန်တို့အတွက် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရောမမြို့တွင် ကလိုအာကာမက်စီမာ ကို တိုင်ဘာမြစ် အတွင်းသို့ စီးဆင်းစေသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် အလယ်ပိုင်းခေတ်များ စောစောပိုင်း တိုင်အောင် ဥရောပနေရာအများစုတွင် အခြားသောကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအတွက် မှတ်တမ်းအနည်းငယ်သာ ရှိခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပြည့်စုံခြင်းမရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် လူဦးရေထူထပ်မှုများက အလယ်ပိုင်းခေတ်များ အတွင်း ဥရောပနှင့်အာရှ တို့ကို ဖြတ်သန်း၍ ကျယ်ပြန့်ပျံနှံ့ခဲ့သည်။ အဖြေရလဒ်အားဖြင့် ဂျပ်စတီနီယမ်ပလိတ်ရောဂါ (၅၄၁-၄၂)နှင့် အမည်းရောင်သေဆုံးခြင်းဟုခေါ်သော ဘူဘိုးနစ်ပလိတ်ရောဂါ(၁၃၄၇၁၃၅၁) တို့ကဲ့သို့သော တစ်ကမ္ဘာလုံးကူးစက်ပျံ့နှံ့သည်အထိ သက်ရောက်မှုရှိသည့်ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူသန်းပေါင်းဆယ်ပေါင်းများ စွာ ကိုသေကြေစေခဲ့၍ လူမှုရေးအသိုင်းအဝန်းကို လုံးဝဥဿုံ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
တစ်ခုလုံးအတွင်းနို့စို့အရွယ်နှင့်ကလေးငယ်များ၏မြင့်မားသောသေဆုံးမှုသည်ဥရောပတွင်နေရာအနှံ့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယင်းသည်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးချို့တဲ့မှုကြောင့် သာမက စိုက်ပျိုးရေး ထက် ပို၍လျင်မြန်စွာ တိုးပွားလာသောလာသော လူဦးရေအတွက် အစားအစာ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း များကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် အုပ်ချုပ်သူများက ပြည်သူများကို မကြာခဏ စစ်ပွဲတိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ဂုတ်သွေးစုပ်မှုများကြောင့် ဆက်လက်၍ ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ပျမ်းမျှ လူတို့၏ အသက်သည် အမှန်တကယ် “ရွံ့ရှာဖွယ်၊ လူမဆန်သည်ကဲ့သို့ တိုတောင်းခဲ့သည်။”
မြို့ဧရိယာများတွင် စံနှုန်းရှိသည့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနည်းပညာများသည် ရေဆိုးရေညစ်များကို ရေဆိုး ပိုက်များအတွင်း စုဆောင်းခြင်း၊ ယင်းကို ရေဆိုးရေညစ်များကို ထိန်းသိမ်း ပြုပြင် ဆောင်ရွက်သည့် စက်ရုံများတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုရန်၊ သို့မဟုတ် မြစ်များ၊ ကန်များ သို့မဟုတ် ပင်လယ်အတွင်းသို့ စွန့်လွှတ်ရန် လုပ်ဆောင်ကြခြင်း များ ဖြစ်သည်။ ရေဆိုးပိုက်များကို ကောင်းမွန်သော ရေဆိုးထုတ်စနစ်နှင့် တွဲဖက်ထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် မိလ္လာကန်များကဲ့သို့ ၎င်းတို့မှ သီးခြားခွဲထားခြင်းများရှိသည်။ တွဲဖက်ထားသည့် ရေဆိုးပိုက်များကို အလယ်ပိုင်း၊ ရှေးကျသည့်အပိုင်း သို့မဟုတ် မြို့ဧရိယာများတွင် အစဉ်အလာအတိုင်း တွေ့ရှိရတတ်သည်။ မိုးသည်းထန်ခြင်းနှင့် မလုံလောက်သည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများက တွဲဖက်ထားသည့် ရေဆိုးပိုက်များကို လျှံကျစေခြင်း၊ သို့မဟုတ် မိလ္လာကန်များကို လျှံကျစေခြင်းတို့ကို ဦးတည် ဖြစ်ပေါ် စေသည်။
ယင်းသည် အနည်းနှင့်အများအားပျော့သောမိလ္လာအညစ်အကြေးများကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ပို့လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စက်ရုံများသည်မကြာခဏရေဆိုးရေညစ်များကို မြူနီစပယ်ရေဆိုးပိုက်များအတွင်းသို့ ပို့လွှတ်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းသည် စက်ရုံများမှ သူတို့၏ ပို့လွှတ်မှုများကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှု မရှိပါက၊ ရေဆိုးရေညစ်စီမံဆောင်ရွက်မှု စနစ်ကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ သမားရိုးကျ ရေဆိုးရေညစ်စုဆောင်းမှု စနစ်များ၏ ကြီးမားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုန်ကျစရိတ်များ သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား တတ်နိုင်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အချို့သော နိုင်ငံများတွင် အခြားနည်း လမ်းဖြစ်သော ကွန်ဒိုမီနီယမ် မိလ္လာသိမ်းစနစ်ကဲ့သို့သော ရေဆိုးရေညစ်စုဆောင်းမှုစနစ်များကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်လာကြသည်။ ယင်းမှာ ပိုမိုသေးငယ်သော အချင်းရှိသည့် ပိုက်လိုင်းများအား ပိုမိုနိမ့်သော ဇောက်အနက် များတွင် အသုံးပြုသည့် ရှေးရိုးမိလ္လာသိမ်းစနစ်ဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသည့် ကွန်ယက်ဆက်နွယ်မှု ပုံစံများဖြင့် ဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ မြူနီစပယ်ရေဆိုးရေညစ် ဆောင်ရွက်မှုစနစ်သည် ယခုအခါ ကျယ်ပြန့်စွာ ပျံ့နှံ့နေပါသည်။ သို့ရာတွင်ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းမူမဟုတ်သေးပါ။(နည်းပညာများလွှမ်းခြုံကြည့်ခြင်းအတွက် ရေဆိုးရေညစ်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုတွင်ကြည့်ပါ)ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် များစွာသော ရေဆိုးရေညစ်များကို ပြုပြင်စီရင်ခြင်းမရှိဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ပို့လွှတ်နေပါသည်။ ဥပမာ- လက်တင်အမေရိကတွင် ၁၅% မျှလောက်သော စုဆောင်းပြီး မိလ္လာသိမ်းခြင်းများကိုသာ စီစဉ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ (လက်တင်အမေရိက ရေပေးဝေရေးနှင့် ရေဆိုးထုတ်စနစ် တွင်ကြည့်ပါ)
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသည့် ရေဆိုးရေညစ်များကို ရေသွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည် အများဆုံးအသုံးပြုမှုဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ထားပြီး ရေဆိုးရေ ညစ်များကို ရှုခင်းသာယာစေရန်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊(အထူးသဖြင့်ဂေါက်ကွင်းများတွင်)။ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပြန်လည်အသုံးပြုမှုများသည်တိုးမြှင့်ကျယ်ပြန့်ပျံ့လာသည်။ များစွာသော မြို့ပတ်လည်နှင့် ကျေးရွာဧရိယာများတွင် အိမ်ထောင်စုများသည် ရေဆိုးပိုက်များဖြင့် ဆက် သွယ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် သူတို့၏ စွန့်ပစ်ရေများကို မိလ္လာကန်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ပုံစံဖြင့် ဆိုက်နေရာရှိ မိလ္လာရေဆိုးနှုတ်စနစ်များသို့ ပို့လွှတ်ပါသည်။
ဂေဟဗေဒဆက်နွယ်မှုနှင့်ဆိုင်သော မိလ္လာရေဆိုးနှုတ်စနစ်ကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် သမားရိုးကျဖြစ်သော မိလ္လာရေဆိုးနှုတ်စနစ်အား အခြေခံကျသော အခြားနည်းလမ်းရွေးချယ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ဂေဟဗေဒဆက်နွယ်မှုနှင့်ဆိုင်သော မိလ္လာရေဆိုးနှုတ်စနစ်သည် ရေအိမ်များကို မြေဆွေးဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ပိုးကောင်များဖြင့် မြေဆွေးဖြစ်စေရန်အပေါ် အခြေခံပြီး၊ ဆီးနှင့် ကျင်ကြီးတို့ကို အပိုခွဲခြားခြင်းဖြင့် သန့်စင်ခြင်းနှင့် တကြော့ပြန်လည်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့အားဖြင့် ယင်းသည် ကျင်ကြီး နှင့် ကျင်ငယ်ရေ ပါသော ရေဆိုးရေညစ် ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်မှုကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီး ကျင်ကြီးမှ ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော ပစ္စည်းများကို ရေဆိုးရေညစ် (ဆီး) တစ်စုံတစ်ရာထဲတွင် တည်ရှိနေခြင်းမှ ဖယ်ရှားပစ်စေသည်။ အကယ်၍ ဂေဟဗေဒဆက်နွယ်မှုနှင့်ဆိုင်သော မိလ္လာရေဆိုးနှုတ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါက၊ မြူနီစီပယ် ရေဆိုးရေညစ်များသည် မီးဖိုချောင်စွန့်ပစ်ရေများသာ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းကို ဥယျာဉ်၊ ပန်းခြံများအတွက် တစ်ကျော့ပြန်အသုံးချနိုင်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ အချို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် မီးခိုးရောင်ရေများကို ဆက်လက်၍ ရေဆိုးပိုက်များသို့ ပို့လွှတ်စေခဲ့သည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ သီးသန့်ထားခြင်း၏ အရေးကြီးမှုများသည် ရေနှင့် ရေဆိုးထုတ်စနစ် တို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ရောဂါများ ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်တွင် မူတည်နေပါသည်။ ယင်းသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ နှင့် အလားတူပင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ နှစ်ခုစလုံးအတွက် ခြားနားသော ဒီဂရီအတိုင်းအတာများဖြင့် ထိခိုက် စေပါ သည်။ နှစ်စဉ် ၅ သန်းမျှသော လူတို့သည် ကာကွယ်မှုပြုနိုင်သောရေမှ သယ်ယူလာသော ရောဂါများကြောင့် သေဆုံးနေကြသည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ ယင်းသည် မလုံလောက်သည့် ရေဆိုးနှုတ်စနစ်များနှင့် ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်သည့် အလေ့အကျင့်များ၏ အဖြေရလဒ်များဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး၏ သက်ရောက်မှုများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်တွင် ကြီးမားသည့် အကျိုးသက်ရောက် မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂရစ်ဖင်၏ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးသက်သေပြချက်လေ့လာမှုက မြင့်မားသည့် ကျန်းမာသန့်ရှင်း ခြင်းသည် ပိုမိုသည့်စွဲဆောင်မှုများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်ဟု ဆိုထားသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်လာသည့် မိလ္လာစနစ်[ပြင်ဆင်ရန်]
WHO နှင့် UNICEF တို့ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်သည့် အစီအစဉ်မှ ရေနှင့်မိလ္လာကို တိုးတက်သည့် မိလ္လာစနစ် အနေဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှာ-
ပြည်သူလူထု၏ ရေဆိုးပိုက်များသို့ ဆက်သွယ်ထားခြင်း
လေဝင်လေထွက်ရှိသော တိုးတက်လာသည့် ကျင်းအိမ်သာများ
ထိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရမူ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ ၆၂% သည် တိုးတက်လာသည့် မိလ္လာစနစ် ကို အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်။ ယင်းသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ထက် ၈% တိုးမြှင့်လာ၏။ ယင်းတစ်ဝက်ထက် အနည်းငယ်ပိုမိုသော သို့မဟုတ် ၃၁% သော ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ရေဆိုးပိုက်များဖြင့် ဆက်သွယ်ထား သော အိမ်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ အားလုံးကို ခြုံငုံ၍ ၂၅ ဘီလီယံရှိသော လူဦးရေသည်တိုးတက်လာသည့်မိလ္လာစနစ်ကိုအသုံးမပြနိုင်ခွင့်မရှိသေးပါ။ဤသို့ဖြင့်အများသုံးအိမ်သာများ(သို့မဟုတ်)ကွင်းပြင်ရှိကျင်းအိမ်သာများကဲ့သို့သော ကွင်းပြင်တွင်ကျင်းကြီးစွန့်ခြင်းများ (သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် သည့် ပုံစံများဖြင့် ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်းများကို ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။ ယင်းတွင် ၁.၂ ဘီလီယံသော လူဦးရေသည် အထောက်အကူပြုမှု လုံးဝမရှိသည်ကို လက်ခံနေထိုင်ကြရသည်။ ယင်း၏အကျိုးရလဒ်သည် ကောင်းမွန်သည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေ၍ ရေဆိုးရေညစ်များသည် သောက်သုံးရေများအား ညစ်ညမ်းစေနိုင်ပြီး နို့စို့ကလေးငယ်များအား ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။ တိုးတက်လာသည့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးစနစ်တွင်လက်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ရေသန့်စင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပြီး နှစ်စဉ်ဝမ်းရောဂါခံစားနေရသော ကလေးငယ်ပေါင်း ၁.၅ သန်းတို့၏ အသက်များကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀% ထက်နည်းသော ကမ္ဘာလူဦးရေသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြသည်တွင် ၉၉% သော လူဦးရေသည် တိုးတက်သည့် မိလ္လာစနစ်ကို အသုံးပြုကြ၍ ၈၁% မှာမူ ရေးဆိုးပိုက်များဖြင့် ဆက် သွယ်ထားခဲ့ကြသည်။
ဟီရီရ အမှိုက်ပုံ- အစ္စရေး
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအစိုင်အခဲများကို အများနှင့်ဆိုင်စွာ အမှိုက်ပုံများတွင် စွန့်ပစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင်ပြာကျအောင်မီးရှို့ခြင်း၊ တဖန်အသုံးချနိုင်အောင်စီမံခြင်း၊ မြေဆွေးများပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် ဇီဝလောင်စာများသို့ အသွင်ပြောင်းခြင်းများသည်ခိုင်မာစွာလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ အမှိုက်ပုံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုးတက်သောနိုင်ငံများသည် အပေါ်ယံမြေဆီလွှာများဖြင့် နေ့စဉ်ဖုံးအုပ်မှုများအတွက် တင်းကျပ်သော စည်းကမ်းဥပဒေများရှိ၍၊ မဖွံ့ဖြိုးသေးသည့် နိုင်ငံများတွင်မူ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ တင်းကျပ်ခြင်းမရှိသည့် လျော့နည်းသောစည်းကမ်း ဥပဒေများအပေါ် မှီခိုအားထားနေရသည်။ နေ့စဉ်ဖုံးအုပ်မှု အရေးကြီးခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောပိုးမွှား ပြန့်ပွားမှုများ လျှော့ချစေခြင်းအပေါ် တည်မှီနေပါသည်။ နေ့စဉ်ဖုံးအုပ်ထား ခြင်းသည် အနံ့အသက်ထုတ်လွှတ်ခြင်းများနှင့် လေတိုက်ခိုက်သောအခါ အမှိုက်များလွင့်ပျံခြင်းကို အနည်းဆုံးဖြစ် အောင် လျှော့ချနိုင်သည်။
ထို့အတူပင် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများသည် ပုံစံပီပြင်စွာရှိသောအမှိုက်ပုံများ၏ အနားသတ်များကို ရွံ့စေးမြေအမျိုး အစားဖြင့် မွမ်းမံထားရှိခြင်း လိုအပ်ချက်များသည် မြေအောက် ရေအားညစ်ညမ်းစေသည့် နေရာပြောင်းရွေ့ ရေစိမ့်ဝင်ခြင်းများကို နည်းနိုင်သမျှနည်းစေရန်ဖြစ်သည်။ (သို့ဖြစ်၍ အချို့သော သောက်သုံးရေ ပေးဝေမှုများတွင် အန္တရာယ်ကျရောက်စေနိုင်သည်။) ပြာကျအောင်မီးရှို့ခြင်း ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးများမှာ အဆိပ်အတောက်ပေါင်းစပ်ပါဝင် သည့် လေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသောအရာများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်း သည် အာရုံစိုက်ဖွယ် ဆန့်ကျင် ဘက်ဖြစ်သော ရလဒ်များအဖြစ် ပါဝင်နေပါသည်။ တစ်ကြော့ပြန်အသုံးပြုရန် စီစဉ်ထားခြင်းနှင့်ဇီဝ လောင်စာများ ပြောင်းလဲ မှုများသည် ရေရှည်ခံသည့် ရွေးချယ်နိုင်သော အခွင့်အရေးများပင်ဖြစ်၍ ယင်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် သာလွန်သည့် ဘဝလည်ပတ်မှုတန်ဖိုးများ ရှိနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဂေဟဗေဒဆက်နွယ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စဉ်းစားတွေးခေါ်ရန်ဖြစ်သည်။ မြေဆွေးများတန်ဘိုးကို အဆုံးစွန် အားဖြင့် ယင်းမြေဆွေးထုတ်ကုန်အား ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှုဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါလိမ့်မည်။
ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး[ပြင်ဆင်ရန်]
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး သည်၊ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး (OSH)၏ ဥပဒေကြောင်းအရ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ၂၉ ဖယ်ဒရယ် စည်းမျဉ်းအစု(CFR) အပိုင်း ၁၉၁၀. ၁၄၁ က ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်များ (MDGs) တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တိုင် အခြေခံ ကျန်းမာသန့်ရှင်းခြင်းသို့ ချဉ်းကပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် လူဦးရေကို ထက်ဝက်အချိုးသို့ လျှော့ချရန် ရည်မှန်းချက် ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် MDGs ၏ ကျန်းမာရေး ကာကွယ်မှုရည်မှန်းချက် ၏ နှေးကွေးနေသည့် တိုးတက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကို “နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးနှစ်” အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်သည် ရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ရှိရန် နားလည်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အထူးအကြောင်းအရာများမှာ-
ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ပတ်လည်ရှိ မနှစ်မြို့ဖွယ်အရာများကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး ၏အရေးကြီးပုံကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာနှင့် ပြည်သူလူထုအကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပြု လုပ်ရန်
ဆင်းရဲမွဲတေမှုလျော့ချခြင်းနှင့် ကျန်းမာခြင်းတို့ကို ထင်ရှားသိသာအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သည့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၊ အိမ်များရှိမိလ္လာစနစ်စီစဉ်မှုများနှင့်
ရေဆိုးရေညစ်ထိန်းသိမ်း ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ချက်များမှ အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ပင်လယ်ရပ်ခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု သင်တန်းကျောင်း ၏ သုတေသနပြုချက်များမှ အကြုံပြုသည်မှာ MDG ၏ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကို ပြည့်မီရန်ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ခြင်း တို့အတွက်ပိုမို၍ အဓိကလူအများလက်ခံရန် လိုအပ်သည် ဟုဆိုသည်။ လက်ရှိတွင်မူ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၍ ရောဂါမဖြစ်စေခြင်းတို့ကို ရေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဖွဲ့အစည်းများမှ အဓိကလုပ်ဆောင် နေ ကြသည်။ သုတေသန ပြုမှုက ငြင်းခုံခဲ့သည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး တိုးတက်ပေါ်ပေါက်စေရန် အမှန်တကယ်အားဖြင့် များစွာသော အဖွဲ့အစည်းများ မှ လှုပ်ရှားမှုများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပညာရေးသင်တန်းများသည် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သင်ကြား ပေးနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး သင်တန်းကျောင်းများသည် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရင်းအမြစ်များကို ညွှန်ပြနိုင်သည်။ (ဥပမာ-ဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ရန်) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း လေ့လာဆည်းပူးသည့် သင်တန်းကျောင်း (IDS)သည် အများပြည်သူညွှန်ပြသည့် အလုံးစုံသော ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး(CLTS) သုတေသနပြုမှုအစီအစဉ်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်၍ အရင်းအမြစ် နှင့် ဆိုင်သောခြားနားသည့် ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ ရှေးရိုးကျေးရွာများ သန့်ရှင်း ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ ကျဆုံးချိန်တွင် ကျေးရွာများကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး အတွက် ကတိပြုနိုင်သည့် အောင်မြင်မှုများကို ရရှိခဲ့သည်။ ရှေးရိုးကျေးရွာများ ကျန်းမာခြင်း ကာကွယ်သည့် အစီအစဉ်များ ကျဆုံးချိန်တွင် ဖြစ်သည်။
CLTS သည် ကျေးရွာများ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း မပြုသည့် ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် အများပြည်သူတို့အား ကွင်းပြင်တွင် ကျင်ကြီး စွန့်ခြင်း၏ ပြဿနာများကို အသိအမှတ်ပြုရန် လွယ်ကူစေ၍ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်နှင့် “ ကွင်းပြင် ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း ကင်းလွတ်ခြင်း” အတွက် စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်စေသည်။ ၎င်းသည် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု လမ်းညွှန်ခြင်းများနှင့် ကျင်ကြီးနှင့် ပါးစပ်တို့အကြားလမ်းကြောင်းများကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရန် အများပြည်သူတို့ လုပ်ဆောင်ချက်နည်းလမ်းများကဲ့သို့သော စုပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြုထားသည်။
IDS “ အတွင်းမျှော်မှန်းကြည့်မြင်ခြင်း” ပေါ်လစီ အကျဉ်းချုပ်တစ်ခုက များစွာသော နိုင်ငံတို့တွင် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးအတွက် ထောင်စုနှစ် ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှုရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်သည် လမ်းချော်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းနောက် CLTS သည် ကွင်းပြင်တွင် ကျင်ကြီး စွန့်ခြင်းများ လွှမ်းမိုးတည်ရှိနေသေးသည့် များစွာသော နိုင်ငံတို့နှင့် ဒေသများတွင် မည်ကဲ့သို့ နည်းလမ်းများ ချမှတ်နိုင်ရန် နှင့် မည်သို့ ကြီးမားသော အတိုင်းအတာဖြင့် ပျံနှံ့စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင် မည်နည်းဟု မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွင်း ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးသည် အစားအသောက်နှင့် တွေ့ထိ သည့် မျက်နှာပြင်များကို ပြည့်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ထင်ရှားသော သေးငယ်သောဇီဝရုပ် ၏ အသီးအရွက်များနှင့် ဆိုင်သော ဆဲ(လ်)များကို ဖျက်ဆီးပစ်ရန် အကျိုးရှိစေသည့် စီစဉ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် လုံလောက်သည့် ပြုမှု ဆောင်ရွက်ချက်များဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။ ယင်းသည် အခြားသော မလိုအပ်သည့် သေးငယ်သော ဇီဝရုပ်များကို အရေအတွက်များလျှော့နည်းသွားစေရန် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လိုလားဖွယ် မကောင်းသော ထုတ်ကုန် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိစေသည့် (သို့မဟုတ်) စားသုံးသူများအတွက် ၎င်း၏ဘေးအန္တရာယ်ကင်းမှု တို့ဖြစ် ရပါမည်။ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအစာနှင့် ဆေးဝါးစီမံ အုပ်ချုပ်မှု၊ ဖက်ဒရယ်(လ်) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ 21 CFR 110, USA) ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကို စံပြုထားသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်းတို့ကို ၂၁ CFR အပိုင်း ၁၇၈.၁၀၁၀ နှင့် တဆက်တည်းဖြစ်သော ၉ CFR အပိုင်း ၄၁၆ဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချမှတ်ထားသည်။
အလားတူပင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လည်း ကျန်းမာခြင်းနှင့်ညီညွတ်သည့် အစားအသောက်များကို အစားအသောက်သန့်ရှင်းရေး ဥပဒေများ တောင်းဆိုချက်များမှ တဆင့်ရရှိစေသည်။ ထပ်မံ၍ အစားအသောက်နှင့် ဇီဝဆေးဝါးစက်ရုံများတွင် သန့်ရှင်းသည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ ဝေါဟာရ သည် ပိုက်များအတွင်းသန့်ရှင်းခြင်း (CIP)နှင့် နေရာတွင် ပိုးသတ်ထားခြင်း(SIP) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အသုံးပြုထားသည့် ပြည့်ဝစွာ သန့်ရှင်းစေနိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် သန့်ရှင်းသော ပျော်ဝင်မှုများနှင့် အခြားသော အရည်အပစ်များမှအပြည့်အဝစီးဆင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းပုံစံသည်အကြိမ်အနည်းဆုံးရပ်ဆိုင်းမှု၊ သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်း အရည်များဗရမ်းဗတာစီးဆင်းမှုများကြောင့် ထုတ်ကုန်ထည့်သွင်းမှုကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် လုံလောက်မှုမရှိစေရပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် သန့်ရှင်းစေမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊ ယင်းပစ္စည်းကိရိယာများကို အစွန်းအထင်းမရှိသည့် သံမဏိများ ၃၁၆ L ဖြင့် ပြုလုပ်ထားရပါမည်။ (သေးငယ်သာ မိုလစ်ဒီနန်ပါဝင်သည့် သတ္တုများကို ရောစပ်ခြင်း) မျက်နှာ ပြင်သည် ထုံးထမ်းစဉ်လာအရ လျှပ်စစ်ဖြင့် အချောကိုင်ထားပြီး၊ ၀.၅ မိုက်ခရိုမီတာထက် နည်းသောအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိစေသည့် မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှု၊ မျက်နှာပြင်တွင် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများတွယ်ကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေများကို လျှော့ချနိုင်သည်တို့ ရှိရပါမည်။
↑ WHO | Sanitation
Urban Wastewater Treatment in France, MEEDDM Archived 17 March 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး&oldid=719957" မှ ရယူရန်